Kungani i-valve cover gasket izoba ukuvuza kukawoyela?
Izikhathi eziningi lapho ukuvuza kwenjini kungenakugwenywa, Ikakhulukazi uma usebenzisa uwoyela omubi, Kunokungcola okuningi emafutheni, Akukona nje kuphela ukwandisa ukonakala nenjini, Kungadala nokuvuza kukawoyela. Ake sixoxe ngokunye ukuvuza kusembozo segumbi le-valve. Yini ebangela i-valve cha ...
uyini Umehluko wokuthwala uphawu lwensimbi nothuli?
Umehluko wokuthwala uphawu lwensimbi nensimbi Umsebenzi uhlukile - ukufaka indandatho yensimbi kungukusebenza kwayo kokufaka uphawu futhi impilo yenkonzo inokubaluleka okubalulekile. - Ukuthwala ikhava yothuli ukuvimbela ukuthwala kube uthuli nezinye izinto ezilahlayo ezithinta umsebenzi. Izinto ezihlukile, zithwala ukubekwa uphawu r ...
Zingaki izinhlobo zezimpawu zezimoto?
Izimpawu zezimoto ezifakwe ezingxenyeni ezihlukene. ingahlukaniswa ibe izingxenye ezilandelayo ngokuya ngezingxenye ezisetshenzisiwe: Uphawu lwamafutha we-Direction, uphawu lwamafutha we-crankshaft, uphawu lwamafutha we-engine, uphawu lwe-valve stem, uphawu lwe-pump oil, uphawu lwe-oil pump, uphawu lwe-oyela lokudlulisa, uphawu lwe-axle shaft oil. uphawu lwehabhu lamasondo, ...
uphawu lukawoyela Izizathu ezejwayelekile zokuhluleka nezindlela zokuxazulula inkinga
Uphawu lukawoyela lungolwesici sokuhambisa esishukumisayo, futhi ubukhona be "ifilimu kawoyela obucayi" yisimo esanele futhi esidingekayo sophawu lukawoyela.Ngenxa yokuthi kukhona ifilimu kawoyela wokuthambisa kuyadingeka ukuqinisekisa ukukhiywa kokuthambeka kokuthambisa kophawu lwamafutha, kanye ubukhona be-lubri ...
Izimpawu zikawoyela kanye ne-o ring kits umhlahlandlela wokuthenga
Lapho ufuna ukuthola izimvu zamanzi ezinokwethenjelwa kanye namasongo e-O.Kunokuningi kakhulu komkhiqizi wezimpawu, mhlawumbe uzodideka, ngoba ziyindawo ehlukile, nentengo ehlukile .. Kuzoba nekhwalithi ehlukile yezimpawu ezahlukahlukene. Ungayithola kanjani indingilizi kawoyela ethembekile nendandatho o? 1- Uwoyela seal factoryne ...
Isimiso se-Hydraulic seal
Uphawu lwamafutha we-Hydraulic ngokuvamile lwenziwe ngezinto zokufaka uphawu lwenjoloba. Indandatho yophawu inesakhiwo esilula, ukusebenza kahle kokufakwa uphawu nokushayisana okuphansi. Ingasetshenziselwa ukunyakaza okuhambisanayo nokunyakaza okujikelezayo, kepha isetshenziselwa kakhulu ukulungisa izimpawu, njengezimpawu eziphakathi kwamapayipi, amakhanda amasilinda kanye ...
Izinhlobo zamandla kagesi wepompo lokuqondisa amandla
Uphawu lokuhambisa uwoyela wepompu yamandla: 1- ukuhambisa uphawu lwebhola lokuqondisa ugesi ngamandla ebhola: uphawu lwamafutha wokufaka kanye nophawu lwamafutha e-rocker shaft. I-2- gear rack steering oil oil seal: okokufaka kwe-shaft shaft, uphawu lwe-pinion shaft oil, i-rack carrier ngaphakathi nangaphandle kwezimpawu zamafutha. 3- uwoyela uphawu lokuqondisa isilinda wokubacindezela. Ulwandle olunamafutha amane ...
Isethulo nezimpawu zezimpawu zamagnetic
I-Magnetic seal seal ngumkhiqizo owenzelwe ngemuva kweminyaka yocwaningo kanye nokuhlolwa. Isebenzisa ngobuhlakani uhlelo lwe-modular magnetic compensation kanye nobuchwepheshe obusha bokufaka uphawu, futhi ukufakwa okulula kungaxazulula izinkinga obekulukhuni ukuziqeda emlandweni wezimboni. Akukhona kuphela ukuphendula ...
Izinhlobo zezindandatho zenjoloba
Indandatho emise okwe-U, evamise ukusetshenziswa ekwenziweni kwezinhlelo zokubacindezela osimweni oluphindayo. Kabanzi imishini yokwakha wokubacindezela isilinda uphawu. I-O-ring isetshenziselwa ikakhulukazi ukubekwa uphawu kwe-static nokuphindisela ukubekwa uphawu. Lapho isetshenziselwa uphawu lwe-Rotary Movement, kukhawulwe kusitifiketi se-rotary esinejubane eliphansi ...
Isixazululo Ekuvuzeni Kukawoyela kweGearbox Oil Seal?
Ukudluliswa kwemishini yikhona okuvame kakhulu kubunjiniyela bemishini. Isetshenziselwa kabanzi ukudlulisa amandla nokudluliswa kokudonswa ikakhulukazi ngamandla wokushayisana wezingxenye zomshini, kufaka phakathi ukuhanjiswa kwebhande, ukuhanjiswa kwezintambo nokudluliswa kwesondo lokushayisana. Ukuhlukaniswa komkhiqizo okuyisisekelo: reducer, br ...
Amathiphu we-9 wezinto zenjoloba ezikhethiwe zezimpawu?
Yiziphi izinto ezibalulekile okufanele zicatshangelwe lapho ukhetha okokufaka uphawu okulungile kokufaka isicelo? Intengo Ethandwayo kanye Nombala Ofanelekayo Ukutholakala kwezimpawu Zonke izinto ezinomthelela ohlelweni lokufaka uphawu: isb. Izinga lokushisa, uketshezi nengcindezi Lezi zonke izinto ezibalulekile ...
Umkhiqizi wochwepheshe be-mechnical seal yiwu inkampani enkulu yemikhiqizo yenjoloba yezimpawu Izimpawu zemishini ezisebenza endaweni enamanzi ngokuvamile zithembele kwifilimu ewuketshezi eyenziwe nguketshezi oluphakathi kophakathi kokungqubuzana kwezindandatho ezihambayo nezimile zokuthambisa. Ngakho-ke, kuyadingeka ukwenziwa ...